कोरोना भाइरस उत्पत्तिको कहाँ बाट भयो ? डेढ वर्षसम्म रहस्यमय - CNN EXPRESS
कोरोना भाइरस उत्पत्तिको कहाँ बाट भयो ? डेढ वर्षसम्म रहस्यमय
जेठ १३, काठमाडौं । सुरुमा चिनियाँ सहर वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको रहस्य डेढ वर्षसम्म सुल्झेको छैन। वुहानको जनावर बेचबिखन गर्ने एक बजारमा चमेरोबाट मानिसमा यो भाइरस सरेको मानिँदै आएको छ। चीनले यो भाइरसबारे विश्वलाई सन् २०१९ को डिसेम्बरमा मात्र जानकारी गराए पनि गत साता अमेरिकाको गुप्तचर एजेन्सीको एक प्रतिवेदनले महामारी सुरु भएको मानिएको मितिभन्दा एक महिनाअगाडि अर्थात् नोभेम्बरमा वुहानस्थित वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीको एक प्रयोगशालाका अनुसन्धानकर्ताहरू बिरामी भएको र अस्पतालमा उपचार भएको दाबी गरेको छ।
Previous: ‘यास’ चक्रवातको प्रभाव : भारी वर्षा हुने सम्भावना, सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह
Next: हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य समायोजन